Aluminium Ishidi Factory, Suppliers - China Aluminium Ishidi Abakhiqizi
I-Aluminium Checker Plate
1 uchungechunge aluminium ishidi
7 Series Aluminium Ishidi
6061 Aluminium Ishidi & Plate
I-Diamond checkered aluminium plate yebhokisi lamathuluzi
ishidi le-aluminium alloy
Ukufika Okusha Okufakiwe Okusha Okufakiwe Okuhamba Phambili
7050 ALUMINUM Ishidi
I-7050 aluminium ingxubevange ephathwa ukushisa enamandla amakhulu, enokumelana nokugqwala okuphezulu kune-7075 aluminium. nobulukhuni obungcono. Inokuzwela okuphansi kokucima
I-7075 aluminium ipuleti ingeye-Al-Zn-Mg-Cu super hard aluminium, enamandla amakhulu, ukuqina okuphezulu okubandayo okusebenzayo okwakha ingxubevange, okungcono kakhulu kunensimbi emnene.
Ishidi le-aluminium le-6061 ngumkhiqizo wekhwalithi ephezulu okhiqizwa ukwelashwa kokushisa nokudweba kwangaphambilini kweMg neSi, enezinto ezinhle kakhulu zokwenza izinto, i-weldability nezakhiwo zokufaka, ukumelana okuhle nokugqwala nokuqina okuphezulu.
6063 T6 ALUMINUM Ishidi
6063 ingxubevange aluminium ipuleti kuyinto Al-Mg-Si high plasticity ingxubevange, nge omuhle kakhulu processing izakhiwo, omuhle kakhulu Welding, extrusion futhi Plating, ezinhle ukugqwala ukumelana, ubunzima, kulula ukupholisha, enamathela, anodic namachibi umphumela kuyinto enhle kakhulu, kuyinto ejwayelekile extrusion ingxubevange.
I-6082 ipuleti le-aluminium iyipuleti ye-aluminium enhle kakhulu phakathi kwamapuleti angama-aluminium ayi-6 (i-Al-Mg-Si), enokuqina okuhle nokusebenza okulula, ukusebenza okuhle kokuphendula kwe-anodic, ukumboza okulula, ukumelana nokugqwala okuhle nokumelana ne-oxidation.
5A05 I-ALUMINUM SHEET
I-5A05 ishidi le-aluminium liyinhlanganisela ye-aluminium-rustproof yochungechunge lwe-aluminium-magnesium, izici eziyinhloko zokuqina okuphansi, amandla aphezulu okuqina nokuqina okuphezulu. Endaweni efanayo, isisindo se-aluminium-magnesium alloy siphansi kunolunye uchungechunge.
Yini ukusetshenziswa okuhlukile kwe-di ...
Ukubuka kanjani ukugqwala okuntantayo okujwayelekile futhi ...
Indlela yokuhlanza i-aluminium plat yokuhlobisa ...
Ikheli: Eningizimu yeWenzhou Avenue, iXuzhou Industrial Park, Isifundazwe saseJiangsu eChina
Abahlinzeki be-Aluminium Sheet Metal Anodized, intengo yeshidi le-aluminium, Eshibhile Aluminium AmaSpredishithi, intengo ye-aluminium 6061 intengo, I-Tread Plate Aluminium AmaSpredishithi, 7050 aluminium ishidi,